Fanamarihana momba ny The Long Tail and the Music Industry | Martech Zone
Fandinihana ny The Long Tail sy ny Indostrian'ny mozika
Alarobia, Septambra 27, 2006 Alarobia, Jolay 9, 2014 Douglas Karr
Nihaona tamin'ny Mpitarika Marketing Indianapolis hafa aho herinandro vitsivitsy lasa izay mba hifanakalo hevitra Ilay rambony lava. Boky mahafinaritra izy io ary mpanoratra mpanoratra mahafinaritra i Chris Anderson.
Hatramin'ny nizarana ilay boky dia nisy olona sasany nitifitra an'i Chris ary nihevitra fa 'namorona' izy Ilay rambony lava. Tsy mino aho fa i Chris no namorona ny teôria Ilay rambony lava, saingy nasehony tsara izany.
Tao amin'ny sakafo atoandro, rehefa niresaka ilay boky ny olona, ​​dia heveriko fa maro amintsika no tonga saina fa Ilay rambony lava dia dingana tsy azo ihodivirana toy ny indostria hafa. Tsy nisy afa-tsy mpanamboatra fiara vitsivitsy, mpamokatra labiera vitsivitsy, mpanamboatra elektronika vitsivitsy… fa ny ora nivoatra rehefa nivoatra sy nivoatra ny teknolojia, nitombo hatrany ny fahombiazany. Ny Long Tail dia sahala amin'ny a Lalàn'i Moore ho an'ny famokarana sy fizarana.
Heveriko fa ny indostria izay miharihary indrindra fa io dia ny indostrian'ny mozika. Dimampolo taona lasa izay, nisy studio vitsivitsy sy marika firaketana vitsivitsy izay nanapa-kevitra hoe iza no nanao izany ary iza no tsy nanao. Avy eo, nanapa-kevitra ny amin'ny radio ny amin'izay nilalao sy ny tsy. Na inona na inona safidin'ny mpanjifa, tena voafetra tokoa ny famokarana sy fizarana mozika.
Tsotra izao. My ny manoratra, manoratra, milalao, mirakitra, mifangaro, ary mizara mozika amin'ny vidiny kely indrindra amin'ny tranokalany manokana. Tsy misy olona eo aminy sy ny mpanjifa… tsy misy olona. Tsy misy olona hilaza aminy fa tsy mahazo fifanarahana firaketana an-tsoratra izy, tsy misy olona handidy azy hanoratra CD, tsy misy olona hilaza aminy fa tsy hitendry ny mozikany izy ireo. Ny lehilahy afovoany dia tapaka tamin'ny vahaolana!
Mahatsiravina izany ho an'ny olona afovoany, saingy misy andalana olona tsy voafetra izay 'tapaka' amin'ny fanaparitahana sy ny famokarana satria lasa lafo vidy sy mahomby kokoa ny fitaovana. Fivoarana voajanahary izany. Ny olana eo amin'ny sehatry ny mozika dia ny nisy so vola be eo anelanelan'ny mpanjifa sy ny mpitendry mozika. Misy tapitrisa tapitrisa ao amin'ny indostria izay mbola tsy reko na izaho na ianao.
Ka… ahoana raha mpitendry mozika iray mahatratra $ 75ka isan-taona? Ahoana raha manana 401k izy ireo, mila miasa isan-kerinandro hitondrana an-trano ny bacon, mila mitady asa etsy sy eroa… ratsy ve izany? Heveriko fa tsy izany. Fantatro ny masinista izay mpanakanto manana lathe - tonga lafatra foana ny asany… ary tsy nahazo vola mihoatra ny $ 60ka isan-taona mihitsy ry zareo. Fa maninona ny mpitendry mozika no sarobidy kokoa noho ilay masinista? Samy niasa tamin'ny fiainany manontolo izy ireo kanto. Samy niakatra tamin'ny fahalavorariana izy ireo izay nahasarika ny sain'ny olona manodidina azy. Fa maninona ny iray mahazo vola an-tapitrisany ary ny iray kosa zara raha miaina?
Ireo no fanontaniana tokony hodinihin'ny indostrian'ny mozika. Ny fahaizana mizara mozika amin'ny alàlan'ny teknolojia dia hitarika hatrany ny fitantanana ny zon'ny nomerika sy ny teknolojia. Ny taranaka ho avy ny Operating Systems, Instant Messenger, sns. Dia hanana mpiara-mizara madio amin'ny mpiara-belona izay tsy ho mpitsara olona afovoany izay mety hitory. Handefa hira amiko i Joe sy i Joe ary i Joe dia tsy hizara serivisy eo anelanelany.
Ny RIAA sy ny indostrian'ny mozika dia miady tsotra fotsiny amin'ny fivoaran'ny indostria. Azon'izy ireo atao ny manandrana manalava azy, saingy tsy misy ilana azy.
Tsoratadidy sosialy: Afeno sy tadiavina
Sep 29, 2006 amin'ny 7: 58 AM
“Fa maninona ny iray no mahazo vola be nefa ny iray kosa zara raha mivelona?”
Satria na dia tsy handoa vola be aza aho hipetrahana mijery masininista any am-piasana, dia hivarotra ny fanahiko amin'ny tapakila Rolling Stones.
Izany no antony tsy itovizany. Izaho, ny mpanjifa, manome lanja azy ireo amin'ny fomba hafa.